थाहा खबर: ‘कलंक भएर मन्त्रालयबाट निस्कन चाहन्न’
‘कलंक भएर मन्त्रालयबाट निस्कन चाहन्न’
कैलाली : पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई बर्खास्त गरिएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएयता सोडारी बर्खास्त हुने दोस्रा मन्त्री हुन्। यसअघि प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित पनि बर्खास्त भएका थिए। सोडारीले सम्हाल्दै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मंगलबार नै कृष्णराज सुवेदीलाई दिइएको छ। नवनियुक्त मन्त्री सुवेदीको योजना र चुनौतीबारे थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
तत्कालीन जिल्ला अध्यक्षको पदच्यूतपछि त्यही मन्त्रालयमा तपाईंले अवसर पाउनुभएको छ, अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?
हाम्रो समाजिक विकास मन्त्रालयले गरेका केही राम्रा कामहरू छन्, तीनलाई अगाडि बढाउँछु। त्यहाँभित्र केही कमीकमजोरी र गलत निर्णय भएका छन् भने त्यसलाई सच्याउँछु। त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्छु। जनताको हितविपरीत कुनै पनि निर्णय भएका छन् भने त्यसलाई म कार्यान्वयन गर्दिनँ।
तपाईं पनि सत्तालिप्त र आफन्त मोहमा पर्नुहुन्छ कि?
आफन्तको घेराभित्र बस्ने मेरो त्यस्तो बानी छैन, सोच पनि छैन। मेरा त्यस्ता आफन्त पनि छैनन्। मेरा आफन्त भनेका सबै सुदूरपश्चिमका जनता र यहाँका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्। सीमित दायराको घेराभित्र म न हिजो थिएँ, न आज छु, न भोलि रहनेछु। म घेराबन्दीमा कहिल्यै रहने छैन। तपाईंको संचार माध्यमबाट सबैलाई भनिदिनुहोस् म यो सीमित घेराको दायराभित्र बस्नेछैन।
सोडारीको बर्खास्तगीपछि अरू मन्त्रीहरू पनि त्रसित छन् भन्छन् नि, हो?
त्यसो होइन, पार्टीले पठाएको हो। पार्टीले फिर्ता बोलायो। त्यसमा अब मन्त्रीहरूले त्रसित नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। काम राम्रो गरून् भन्ने पार्टीको चाहना हो। त्यसअनुसार हामीले आफ्नो कर्तव्यबोध गर्नुपर्छ। जनताको पक्षमा जनताको हित हुने काम गर्नुपर्छ। एउटा मन्त्री बर्खास्त हुँदा अरू मन्त्री त्रसित हुनुपर्दैन।
पार्टीले कुन अवस्थामा फिर्ता बोलाउँदोरहेछ?
भ्रष्टाचार, लोभलालचमा न म आफू फस्छु, न अरूलाई फस्न दिन्छु। जसले कमिसनको कुरा गर्छ, जसले भ्रष्टाचारको कुरा गर्छ, तीनलाई छुट पनि हुँदैन। चाहे त्यो कर्मचारी होस् वा नेता। न आफू गर्ने न अरूलाई छुट दिने।
पार्टीले आफूअनुकूल हेर्छ होला। पार्टीअनुकूल हेर्छ होला। त्यस्तो अवस्थामा फिर्ता बोलाउँछ।
पूर्वमन्त्री जो बर्खास्त हुनुभयो, उहाँ त गुटको परिणाम भन्नुहुन्छ नि?
खै अहिले गुट नै छैन। केको गुटको परिणाम भन्ने? गुट उपगुट छैन। गुटले कहाँ गर्छ त्यस्तो?
तपाईंलाई पद हस्तान्तरण गर्दा पूर्वमन्त्री सोडारीले के भन्नुभयो?
बधाइ छ। तपाईंलाई कार्यकालको शुभकामना। मबाट हुने सहयोग र समर्थन तपाईंप्रति रहिरहनेछ भन्नुभयो।
जनताले विकासको अनुभूति गर्नुपर्ने बेलामा मन्त्री फेरबदल हुन थालेपछि जनताले सरकारको आभास कहिले गर्लान् त?
संघीयता भनेकै प्रदेश सरकार हो। स्थानीय तहमा पनि हिजोको संरचना छ, केन्द्रमा पनि छ। हामी प्रदेशको सरकार र प्रदेशको सबै संरचना नयाँ हो। यहाँ कर्मचारीको अभाव छ। पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। केन्द्रले पठाएपछि पनि उनीहरू बाटोबाटै फिर्ता हुन्छन्। त्यस्तो परिस्थिति छ। हिजोसम्म म पनि सांसद थिएँ। धेरै जानकारी लिएको छु। कर्मचारी नभएका कारण पनि विकास निमार्णका काम, जनताका काम पर्याप्त मात्रामा हुन सकेका छैनन्।
त्यसमाथि अधिकार बाँडफाँटमा पनि समस्या छ। पहिले केन्द्रले बनाइसकेपछि मात्रै प्रदेशले बनाउनुपर्नेछ। त्यसमा पनि केही समस्या छ। त्यसका बाबजुद पनि हामी उम्किने ठाउँ छैन। जनताले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रो काँधमा छ। केन्द्रसँग पनि समन्वय गर्छौं। स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर हाम्रा साझा अधिकार र एकल अधिकारहरूलाई प्रयोग गरेर नियम कानुन बनाएर अगाडि बढ्छौँ।
सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ। सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका हेल्थपोष्टहरूमा सिटामोल अभाव छ। यस्ता थुप्रै चुनौतीबीच बागडोर थाम्न आउनुभएको छ। योजना छन् त?
शिक्षाभित्रका राम्रा कामहरू पनि बुझेको छु। विकृति विसंगतिहरूलाई पनि बुझेको छु। कस्ता सरहरू पढाउँछन् कस्ता पढाउँदैनन् भन्ने पनि बुझेको छु। एकै दिन एकै छिनमा त हुँदैन तर शिक्षामा सुधारका लागि म प्रतिवद्ध छु। शिक्षामा सुधार भएन, हामीले शिक्षामा सुधार गर्न सकेनौँ भने समाजमा सुधार हुँदैन। स्वास्थ्यमा पनि धेरै समस्या छन्। सबैको सहयोगमा क्रमिक रूपले सबै समस्याहरूको अन्त्य गर्छौं।
यसभन्दा पहिलेका मन्त्रीबाट पनि यस्तै आवश्वासन आउँथ्यो तर खासै काम भएको पाइएन। यहाँका नागरिकलाई कहिले प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउनुहुन्छ?
म अहिले यति दिन, उति दिन भनेर समय सीमा तोक्दिनँ। म अब नियमित काममा जान्छु। के कस्तो छ अवस्था बुझ्छु। २–४ दिन बुझ्न समय लाग्ला। त्यसपछि यति दिन उति दिन भन्दा पनि चाँडै धेरै काम हुन्छ। अब त ढिलो गर्ने बेला पनि छैन। आर्थिक वर्षको चार महिना पनि बितिसक्यो। असारको महिनामा बालुवामा पानी हालेर योजना पारित गर्ने कुरामा कत्ति पनि हामी सहमत हुँदैनौँ। त्यसैले यति दिन, उति दिन भन्दा पनि चाँडै त्यसको परिणाम जनताका बीचमा पुर्‍याउने प्रयास गर्नेछु।
मन्त्रालयमा बेलाबेलामा आर्थिक अपचलन र कमिशनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो नि? अझै त्यस्तै अवस्था नरहला भन्न सकिन्छ र?
भ्रष्टाचार, लोभलालचमा न म आफू फस्छु, न अरूलाई फस्न दिन्छु। जसले कमिसनको कुरा गर्छ, जसले भ्रष्टाचारको कुरा गर्छ, तीनलाई छुट पनि हुँदैन। चाहे त्यो कर्मचारी होस् वा नेता। न आफू गर्ने न अरूलाई छुट दिने। म त्यस्ता गलत कामविरुद्ध डटेर लाग्नेछु। मलाई साँझ बिहान खान पुगेको छ। अरू केही गर्नु छैन।
त्यो कमिसन समिसनका कुरा हामीबाट हुँदैन। यदि भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सकेनौैँ भने हामी कोही सफल हुन सक्दैनौँ। सबै असफलको रूपमा हामी गणना हुनेछौँ। हामी इतिहासमा कलंक भएर त्यो मन्त्रालयबाट निस्कन चाहँदैनौँ।
योजना त राम्रै सुनाउनु भयो तर कर्मचारी अभावमा कुनै पनि काम तीब्र गतिमा भइरहेको छैन। तपाईंका योजनाहरू पूरा हुन्छन् भनेर कसरी मान्ने?
हिजो पदभार ग्रहण गरेँ। त्यसपछि सबै कर्मचारीहरूले मन्त्रालयमा स्वागत गर्नुभयो। निर्देशनात्मक कुराहरू गर्नुपर्‍यो भनेर हाम्रो सचिवज्यूले भन्नुभयो। तर, मैले अनुरोध गरेँ- यो सुदूरपश्चिम प्रदेश पिछडिएको क्षेत्र हो। यो सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हुने काम कर्मचारीबाट दायाँबायाँ नहुन्। समयमै योजना सम्पन्न हुन्। अहिले म तपाईंहरूलाई निर्देशन होइन, अनुरोध गर्छु। तपाईंहरूसँग मैले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेको छु भनेको छु।
सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अग्रणी प्रदेश बनाउने तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट बनाउन मैले कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छु। यदि काममा रुचि देखाउनुभएन, दायाँबायाँ गर्नुभयो भने उहाँहरू आफैँ सजायको भागिदार बन्नुहुनेछ।
जो आए पनि गफमात्रै दिने भइरहेको छ। तपाईंको सवालमा लागू नहोला भन्ने के छ आधार?
अहिलेसम्म त्यस्तै भएको हो। जनताले विश्वास नगर्नु स्वाभाविक नै हो। त्यसमा दुःख मान्दिनँ तर मबाट गफ मात्र हुँदैन। विश्वास दिलाउन चाहन्छु।